Daawo Sawirrada: Jaaliyadda Soomaaliyeed ee South Africa oo Xaflad mahadcelin ah u sameysay Turkiga – Radio Muqdisho
Xaflad casho sharaf ah oo si weyn loo asgaasimay looguna mahadcelinayay Dowladda iyo shacabka Turkiga oo ay iska kaashadeen Jaaliyadda iyo Safaaradda Soomaaliya ee K/Afrika ayaa lagu qabtay magaalada Pretoria ee dalkaasi.
Casho sharaftaan ay Jaaliyadda ku martiqaadday Safaaradda Turkiga ee K/Afrika ayaa ka soo qeybgalay Safiirka Turkiga u fadhiya K/Afrika, Xoghayaha koowaad, Xoghaya labaad, iyo qaar diblomaasiyiin kale oo ka tirsan Safaaradda.
Xaflada ayaa dhanka Dowladda Soomaaliya ugu qeybgalay Danjire Jamal Barrow iyo Diblomaasiiyinta Safaaradda, waxaa sidoo kale ka qeybgalay qaar ka mid ah Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Johannseburg.
Intii ay socotay Xafladda ayaa qaar ka mid ah Jaaliyadda Soomaalida oo qudbado kala duwan ka jeediyeen waxa ay ka hadleen xiriirka walaahaha Turkiga iyo sida ay Soomaaliya mar walba ula garab taaganyihiin caawimaadda, iyagoo sidoo kale sheegay in Soomaali meel walba ay joogto ay ilaabi doonin abaalka Shacabka iyo Dowladda Turkiga u galeen xilli ay Soomaaliya u baahneed caawimaad. waxaana intii ay Xafladda socotay la soo bandhigay Fanaan Soomaaliyeed oo heeso gubaabo ah u qaaday Turkiga.
Safiirka Turkiga u fadhiya K/Afrika, Ambassador Elif Çomoğlu Ülgen oo Xafladda ka hadashay ayaa sheegtay in ay aad ugu faraxsanahay casha sharaftan ay u sameyeen Jaaliyadda Soomaalida ayadoo taasi ay ka dhigantahay walaaltinimada ka dhaxeeysa labada shacab.
“ Waxaan idinkaga mahadcelinayaa si qalbi furan dhamaan fariimaha aad caawa ina soo gaarsiiseen waxaa sidoo kale aan ballanqaadayaa in aaan gaarsiiin doona shacabaka iyo Madaxweynaha Turiga,waxaana idin ballanqadayaa in mar walba ay walaalaha Turkiga idin garab taaganyihiin”ayay tiri Safiirka.
Sidoo kale Danjire Jamal Barrow ayaa isna dhankiisa sheegay in Turkiga uu mar walba caawimaad la garabtaaganyahay Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed taasina ay taariikhda qori doonto,waxa uu tusaale u soo qaatay qaraxii 14 october in dhaawacii ugu badnaa loo qaaday Turkiga.
“ Muhiimadda casha sharaftan aan u sameynay ah ayaa ah u mahadcelin madaxda iyo shacabka Turkiga gurmadii ugu dambeyay ee deg degaa oo ay u fidiyeen shacabkii ku waxyeeloobay qaraxii argagixsada ee ugu dambeeyay bishii october ka dhacay Muqdisho waxeyna Turkiga ugu jawaabeen si deg deg in gurmad caafimaad loo fididyo dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi.
Gabagabada Xafladda ayaa Danjire Jamal Barrow gudoonsiiyay Haddiyad ay Safaaradda Soomaaliya ugu talagashay Safiir Elif Çomoğlu Ülgen, ayadoo ay Xafladda ku soo idlaatay jawi wanaagsan.
Daawo Sawirrada: Maamulka G.Banaadir oo Casho sharaf u sameeyay guddoomiyaha Barlamaanka Jabuuti